Mayelana nathi | I-GERMANCAX
mina www.almancax.co, Imfundo yaseJalimane eTurkey kusukela ngo-2006 nanamuhla amaVisa aseJalimane, izimvume zisebenza njengezikhathi zokuSebenza nezinsizakalo ezisebenza ngezixazululo ngezinkinga ezibhekene nabaseTurkey eJalimane.
I-Germanerman iqukethe izinkulungwane zamakhasi amadokhumenti ngezigaba ezahlukene kanye nokuqukethwe okuhlukile cishe kuwo wonke amazinga womsebenzisi.
Nge-German, ungathola ulwazi oludinga imfundo yolwimi yangaphandle.
Ekuqaleni kweminyaka yama-2000, ngenkathi uhlelo lwezemfundo oluncomekayo lusanda kuxoxwa futhi lwasetshenziswa, njenge-almancax, sisebenzisa imfundo yolimi lwangaphandle ngaleli hlelo okokuqala ezweni lethu. Lolu hlelo lwezemfundo, lapho ukubamba iqhaza kusabalala ngokuhamba kwesikhathi, luhlukanisa abafundi ezinkingeni zesikhathi nezasemkhathini. Ibavumela ukuthi balandele izinkulumo futhi babambe iqhaza ezingxoxweni noma nini nanoma kuphi lapho befuna khona. Izinkundla ze-Almancax nazo zilungiselelwe ngokucophelela ezingxoxweni ezinjalo nasekwabelaneni ngazo.
almancax, kanye okuqukethwe ezibanzi inkundla, zonke izinhlobo uzosebenza abafundi of imidlalo German ulimi, iwebhu ne zokusebenza zeselula, izinkulumo ezibhaliwe, video izinkulumo, izivivinyo, iqukethe imibhalo ehlukahlukene kanye amashumi efana ezinkulungwane okuqukethwe.
Ngesi-German; Ungaqala kusuka ekuqaleni ukuba zifunde isiJalimane, ungakwazi ukuthuthukisa ulwazi lwakho ekhona, wenze umsebenzi wesikole futhi ukuthola ulwazi oludingekayo ukuze ucwaningo lwakho, isiJalimane, ungase uprakthize, ungafunda yini uzibuze German naseJalimane, ongaxazulula ukuhlolwa German kungaba ukudlala imidlalo, ungaxoxa. Ngokufingqa, ungafinyelela zonke izinhlobo zolwazi mayelana nesiJalimane, ungazithuthukisa lapha.
Ngaphezu kwalokho, awuwedwa ekwenzeni zonke lezi zinto; hhayi kuphela emakhoneni amane aseTurkey, avela kuwo wonke amazwe aseYurophu, amaphuzu ahlukene emhlabeni, abelana nawe inhloso efanayo, izinkulungwane zabantu baseTurkey nazo zifunda isiJalimane lapha, zixazulula izinkinga lapha.
Kanye iforamu yethu ukufinyelela ulwazi mayelana eJalimane, ifundiswe eJalimane, undergraduate, iziqu, master, thola ulwazi mayelana namathuba PhD, A1 ingalungiswa izivivinyo ezifana A2 nokungena lezi izivivinyo ngaphambi futhi kwethu ulwazi alabilirsiniz.forum kuka ngokuwina abangane Germany passport kulabo wayehlose ukuhamba, izinqubo-visa, kokuhlanganiswa umndeni imisebenzi, amaseshini ukuthatha, imvume yokusebenza e-Germany, usebenzisa ilayisensi kusuka Turkey, inqubo izivakashi visa kungathatha ulwazi kakhulu endabeni uya njengoba Omunye umfundi eJalimane futhi sithola yararlanabilirsiniz.y ukuze ungaba nolwazi lakho ngale nkinga, unganikeza ngolwazi ukuthi kungenzeka ewusizo for Yizimfundamakhwela.
Imininingwane, imfundo, ingxoxo, ukwabelana, umsebenzi, nenhlonipho, ngocwaningo, Ukubambisana ezaziletha ndawonye ipulatifomu ongafinyelela zonke izinhlobo ulwazi!
Asigcini ngokuhlinzeka ngolwazi ngezilimi zangaphandle kubahlanganyeli besithangami, siphinde sibasize ngezinkinga ababhekana nazo emazweni aseYurophu (ikakhulukazi eJalimane). nokuthi ziyini izici zamasiko, imibuzo eminingi nezinkinga kuxoxwa ngazo ezinkundleni ze-almancax.
Izifundo ezibhalwe futhi ezizimele zesiJalimane,
Amaphethini okukhuluma isiGerman,
Izinkondlo zesiJalimane, izindaba, izaga, amaqhinga,
Imibuzo ehlukahlukene nezimpendulo mayelana nolimi,
Amakheli esichazamazwi esetshenziswa ku-intanethi futhi asebenzayo
futhi kunezinhlobo eziningi kakhulu zamaphepha okumele abhalwe lapha.
Ukuze ufunde kabanzi, kufanele ubuyekeze ezinye izingxenye zeforamu yamaJerman.